Vaovao - Toeram-piofanana manokana an'ny Tafika Fambolena Qingdao Florescence
Nanomboka tamin'ny 12 Mey ka hatramin'ny 13 Mey 2020, Qingdao Florescence International Trade Co., Ltd. dia nanam-bintana nanasa an'Andriamatoa You from Changqing Industrial Group hampiofana anay rehetra. Tao anatin'izay roa andro izay, mpiara-miasa Izy rehetra dia nandray anjara mavitrika, nandalina tamim-pahavitrihana ary nahazo tombony betsaka, ary tiako ny misaotra an'Andriamatoa Gai sy Andriamatoa You noho ny fanoloran-tenanareo.
Toa nampahafantatra ny atin'ny fotoam-panofanana sy ny fitsipiky ny hetsika ny mpampiantrano.
Fanazavana mafampana an'ny mpampianatra Mras You
Teo ambany fitarihan'ny Teacher You, niditra haingana tao amin'ny tontolon'ny fianarana ambony ny tsirairay. Ity sary manaraka ity dia mampiseho an'Andriamatoa Ianao manazava ny fomba fampiharana ny fomba 5W amin'ny tena asa. Nandray anjara mavitrika avokoa ireo mpiara-miasa rehetra. Nifandray tamin-kafanam-po tamin'ny atmosfera velona ny tsirairay
Taorian'ny fiofanana iray andro dia nangataka ny rehetra ny Mpampianatra You hizara ny kabariny tsirairay ao amin'ilay vondrona. Ny tsirairay dia nizara tamin-kafanam-po sy tamin-kafanam-po ireo fahaiza-miasa isan-karazany nianarana androany, sy ny fomba fampiharana ireo fitsipika amin'ny asa azo ampiharina.
Misaotra tamin'ny ezaka sy fambolena! Misaotra anao tamin'ny anjara birikinao sy ny fanohananao! Ny orinasan'i Qingdao Florescence koa dia ho "orinasa mandrakizay"!
Florescence dia hanatrika ny SEMA Show any Las Vegas, Etazonia, 5 nov.
Hasehonay ny vokatray ny fantsom-pako anatiny sy ny tampony, miandrandra anao hihaona aminao amin'ny trano heva 41229!
afaka mamatsy ny fantsom-bokotra anaty butyl sy fantsom-bozaka voajanahary ho an'ny kodiarana toy ny eto ambany isika.
ATV Tube Inner Tube
Tube anaty atin'akanjo kodiarana
Tube Tyre Indostrialy Tyro
Tube Tyre Inner an'ny kamiao
Tube traktera ao anatiny Tyro
Tube mavesatra amin'ny fantsom-pifandraisana amn'ny renirano Milomano Tube
Fantsom-panala amin'ny ski ski